ကြည့်နေကျ ဇာတ်အိမ်တွေနဲ့ လုံးဝကွဲထွက်ပြီး ကြည့်ရကျိုးနပ်စေမယ့် "Ustad Hotel" - For her Myanmar
အိန္ဒိယဇာတ်ကား အဟောင်းထဲက အကောင်းလေးမို့ အနှစ်ပါပါနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ
ယောင်းတို့ရေ… ဒီတစ်ခေါက်မှာ မင်မင်ဝေမျှပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးတော့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေကိုမှ စွဲစွဲလမ်းလမ်းကြိုက်တတ်ကြတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်ပါနော်.. တစ်ခါတလေမှာ ဇာတ်ကားအသစ်တွေကို စောင့်ကြည့်ရတာထက် မကြည့်ရသေးတဲ့ ဇာတ်ကားအဟောင်းလေးတွေကို ပြန်ရွေးပြီး ကြည့်ရတာက ဖီလင်တစ်မျိ်ုးပဲလေ.. ဒီတော့ မင်မင်ကနေ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ရှိထားပြီး IMDB 8.3 ရရှိခဲ့တဲ့ Ustad Hotel အမည်ရ ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း ဖောက်သည်ချပေးဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
ဇာတ်ကားအစမှာတော့ သားယောကျာ်းလေးအရမ်းလိုချင်နေတဲ့ အဘူဒူရာဇတ်ရဲ့ ဇနီးသည်က သားယောကျာ်းလေးကို မျှော်လင့်ရင်း (၄)ခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့တဲ့အထိ မိန်းကလေးတွေချည်း ဖြစ်နေခဲ့ပြီး (၅)ယောက်မြောက်ရင် သွေးကျမှ ဖိုင်ဇယ်ဆိုတဲ့ သားယောကျာ်းလေး ရရှိခဲ့တာမို့ အဘူဒူရာဇတ်က သူ့ခြေရာကိုနင်းမယ့်သားဆိုပြီး အလွန်မျှော်လင့်ထားရှိသူပါ…
သားယောကျာ်းလေးရပြီးမှ ဇနီးသည်က ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့တာကြောင့် အစ်မ(၄)ယောက်လက်ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဖိုင်ဇယ်ကတော့ အစ်မတွေနဲ့အတူ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်ရင်း ချက်ပြုတ်တာကို ဝါသနာကြီးလာခဲ့ပါတယ်… ဖခင်ကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မီးဖိုချောင်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘဲ စီးပွားရေးကိုသာ ဝါသနာပါဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်….
အစ်မ(၄)ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ပြုသွားကြပြီး ဖခင်ကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ချိန်မှာတော့ ဖိုင်ဇယ်ဟာ ဖခင်နဲ့အတူ5Star ဟိုတယ်ပေါင်းဖွင့်ဖို့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ဆွစ်ဇလန်မှာ Hotel Management တက်မယ်လို့ လိမ်လည်ပြီး စားဖိုမှူးသင်တန်းသွားတက်နေခဲ့ပါတယ်…
ကျောင်းပြီးချိန် အိန္ဒိယကိုပြန်လာတဲ့အခါ အိမ်ထောင်ဖက်တွေ့ရင်းနဲ့ စားဖိုမှူးသင်တန်းကို သင်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖခင်သိရှိသွားခဲ့ပြီး ဒေါသူပုန်ထပါတော့တယ်.. ဖိုင်ဇယ်ရဲ့ ပတ်စ်ပို့နဲ့ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းသွားတဲ့အတွက် ဆွစ်ဇလန်ကိုပြန်ပြီး စားဖိုမှူးလုပ်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးလည်း ခေတ္တပျောက်ပျက်သွားရပါတော့တယ်… စားဖိုမှူးလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာမနေနဲ့ဆိုတဲ့ ဖခင်ရဲ့စကားကြောင့် ဖခင်ဘက်က အဘိုးဆီမှာသွားရောက်နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်…
ဖိုင်ဇယ်အဘိုးဟာလည်း ဟင်းချက်ဝါသနာကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကမ်းခြေတစ်ခုမှ Ustad Hotel ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူပါ… သူ့ရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူဟာ ဆိုင်ဝင်ငွေထဲကနေ လစဉ်တိုင်း အမည်မဖော်ဘဲ ငွေပို့ပေးနေသလို အကြွေးတွေလည်း အများကြီးတင်နေသူပါ… (ဘာကြောင့် အကြွေးတင်နေလဲဆိုတာကတော့ ကြည့်တော့မှ သိမှာနော်..) သူ့မြေးဖိုင်ဇယ်ကိုတော့ အများကြီးသင်ကြားပြသပေးပြီး လမ်းညွှန်မှုတွေကို အမြဲပြုလုပ်ပေးနေသလို သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကို စေလွှတ်ပြီး အတွေ့အကြုံတွေလည်း ယူစေခဲ့ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဖိုင်ဇယ်တစ်ယောက် အဘိုးဆီနေရင်း သူ့သဘောဆန္ဒတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ….
ဖိုင်ဇယ်ရဲ့ ဆွစ်ဇလန်ပြန်ဖို့ အိပ်မက်တွေကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ…
ဆိုတာတွေကိုတော့ ယောင်းတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဇာတ်အိမ်မျိုးနဲ့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာမို့ အကောင်းဆုံးအခန်းတွေကို ချန်လှပ်ထားလိုက်ပါတော့မယ်နော်…
Ustad Hotel ဇာတ်ကားလေးက ကြည့်နေကျ ဇာတ်အိမ်နဲ့ လုံးဝကွဲထွက်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အစားအသောက်အကြောင်း ၊ ပရဟိတစိတ်ထားအကြောင်းနဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ဘဝတွေအကြောင်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာမို့ ယောင်းတို့ကို ကြည့်ရကျိုးနပ်စေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ… နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်…
အိန်ဒိယဇာတျကား အဟောငျးထဲက အကောငျးလေးမို့ အနှဈပါပါနဲ့ ကွညျ့ရှုရမှာပါ
ယောငျးတို့ရေ… ဒီတဈခေါကျမှာ မငျမငျဝမြှေပေးမယျ့ ဇာတျကားလေးတော့ အိန်ဒိယဇာတျကားတှကေိုမှ စှဲစှဲလမျးလမျးကွိုကျတတျကွတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျပါနျော.. တဈခါတလမှော ဇာတျကားအသဈတှကေို စောငျ့ကွညျ့ရတာထကျ မကွညျ့ရသေးတဲ့ ဇာတျကားအဟောငျးလေးတှကေို ပွနျရှေးပွီး ကွညျ့ရတာက ဖီလငျတဈမြိုးပဲလေ.. ဒီတော့ မငျမငျကနေ ၂၀၁၂ ခုနှဈကတညျးက ထှကျရှိထားပွီး IMDB 8.3 ရရှိခဲ့တဲ့ Ustad Hotel အမညျရ ဇာတျကားလေးအကွောငျး ဖောကျသညျခပြေးဖို့ ရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပါတယျ…
ဇာတျကားအစမှာတော့ သားယောကျြားလေးအရမျးလိုခငျြနတေဲ့ အဘူဒူရာဇတျရဲ့ ဇနီးသညျက သားယောကျြားလေးကို မြှျောလငျ့ရငျး (၄)ခါ ကိုယျဝနျဆောငျခဲ့တဲ့အထိ မိနျးကလေးတှခေညျြး ဖွဈနခေဲ့ပွီး (၅)ယောကျမွောကျရငျ သှေးကမြှ ဖိုငျဇယျဆိုတဲ့ သားယောကျြားလေး ရရှိခဲ့တာမို့ အဘူဒူရာဇတျက သူ့ခွရောကိုနငျးမယျ့သားဆိုပွီး အလှနျမြှျောလငျ့ထားရှိသူပါ…
သားယောကျြားလေးရပွီးမှ ဇနီးသညျက ရုတျတရကျဆုံးပါးသှားခဲ့တာကွောငျ့ အဈမ(၄)ယောကျလကျပျေါမှာ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ ဖိုငျဇယျကတော့ အဈမတှနေဲ့အတူ မီးဖိုခြောငျထဲ ဝိုငျးဝနျးခကျြပွုတျရငျး ခကျြပွုတျတာကို ဝါသနာကွီးလာခဲ့ပါတယျ… ဖခငျကတော့ ယောကျြားလေးတဈယောကျက မီးဖိုခြောငျဝငျတယျဆိုတဲ့ ကိစ်စကို လုံးဝ လကျမခံနိုငျဘဲ စီးပှားရေးကိုသာ ဝါသနာပါဖို့ တှနျးအားပေးခဲ့ပါတယျ….
အဈမ(၄)ယောကျလုံး အိမျထောငျပွုသှားကွပွီး ဖခငျကလညျး နောကျအိမျထောငျပွုလိုကျခြိနျမှာတော့ ဖိုငျဇယျဟာ ဖခငျနဲ့အတူ5Star ဟိုတယျပေါငျးဖှငျ့ဖို့ သဘောတူညီခကျြနဲ့ ဆှဈဇလနျမှာ Hotel Management တကျမယျလို့ လိမျလညျပွီး စားဖိုမှူးသငျတနျးသှားတကျနခေဲ့ပါတယျ…
ကြောငျးပွီးခြိနျ အိန်ဒိယကိုပွနျလာတဲ့အခါ အိမျထောငျဖကျတှရေ့ငျးနဲ့ စားဖိုမှူးသငျတနျးကို သငျကွားခဲ့တဲ့အကွောငျး ဖခငျသိရှိသှားခဲ့ပွီး ဒေါသူပုနျထပါတော့တယျ.. ဖိုငျဇယျရဲ့ ပတျဈပို့နဲ့ အရေးကွီးစာရှကျစာတမျးတှကေိုလညျး သိမျးဆညျးသှားတဲ့အတှကျ ဆှဈဇလနျကိုပွနျပွီး စားဖိုမှူးလုပျခငျြတဲ့ သူ့ရဲ့စိတျကူးလညျး ခတ်ေတပြောကျပကျြသှားရပါတော့တယျ… စားဖိုမှူးလုပျခငျြရငျ အိမျမှာမနနေဲ့ဆိုတဲ့ ဖခငျရဲ့စကားကွောငျ့ ဖခငျဘကျက အဘိုးဆီမှာသှားရောကျနထေိုငျနခေဲ့ပါတယျ…
ဖိုငျဇယျအဘိုးဟာလညျး ဟငျးခကျြဝါသနာကွီးသူ တဈယောကျဖွဈပွီး ကမျးခွတေဈခုမှ Ustad Hotel ဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျဖှငျ့ထားသူပါ… သူ့ရဲ့ အဘိုးဖွဈသူဟာ ဆိုငျဝငျငှထေဲကနေ လစဉျတိုငျး အမညျမဖျောဘဲ ငှပေို့ပေးနသေလို အကွှေးတှလေညျး အမြားကွီးတငျနသေူပါ… (ဘာကွောငျ့ အကွှေးတငျနလေဲဆိုတာကတော့ ကွညျ့တော့မှ သိမှာနျော..) သူ့မွေးဖိုငျဇယျကိုတော့ အမြားကွီးသငျကွားပွသပေးပွီး လမျးညှနျမှုတှကေို အမွဲပွုလုပျပေးနသေလို သူ့သူငယျခငျြးတှဆေီကို စလှေတျပွီး အတှအေ့ကွုံတှလေညျး ယူစခေဲ့ပါတယျ…
ဒီလိုနဲ့ ဖိုငျဇယျတဈယောကျ အဘိုးဆီနရေငျး သူ့သဘောဆန်ဒတှေ ဘယျလိုပွောငျးလဲသှားမှာလဲ….
ဖိုငျဇယျရဲ့ ဆှဈဇလနျပွနျဖို့ အိပျမကျတှကေရော ဘယျလိုဖွဈသှားမှာလဲ…
ဆိုတာတှကေိုတော့ ယောငျးတို့မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ဇာတျအိမျမြိုးနဲ့ ဆကျလကျကွညျ့ရှုရမှာမို့ အကောငျးဆုံးအခနျးတှကေို ခနျြလှပျထားလိုကျပါတော့မယျနျော…
Ustad Hotel ဇာတျကားလေးက ကွညျ့နကြေ ဇာတျအိမျနဲ့ လုံးဝကှဲထှကျပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ အစားအသောကျအကွောငျး ၊ ပရဟိတစိတျထားအကွောငျးနဲ့ မထငျမှတျထားတဲ့ဘဝတှအေကွောငျး ရိုကျကူးပုံဖျောပေးထားတာမို့ ယောငျးတို့ကို ကွညျ့ရကြိုးနပျစမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈခုပါ… နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကစြမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော…
Tags: Bollywood, drama, hotel, india, Movie, Movie review, review, Tamil